प्रस ,्ग, दृष्टि र साझेदारी मूर्खता | Martech Zone
बिहीबार, मे 10, 2012 आइतवार, सेप्टेम्बर 8, 2013 Douglas Karr
जब म राजमार्गमा गाडी चलाउँछु, मलाई लाग्छ कि यो कुनै चमत्कारीको केही कुरा छैन जुन मैले यसलाई जीवितै बनाउने बनाएको छु र (समयमै) समयमै। मलाई लाग्छ कि यो कुनै चमत्कार भन्दा कम छैन किनकि जब म धेरै स्मार्ट मानिससँग काम गरीरहेको छैनँ, म ट्विटर र फेसबुकमा धेरै मूर्ख बकवास पढ्दैछु ... र टेलिभिजनमा धेरै मूर्ख बकवास हेर्दैछु। यदि व्यक्तिले कारहरू ड्राइभ गरे जस्तै उनीहरूले जानकारी साझा गरे, म लाग्छ ड्राइविंगको औसत आयु about२ सेकेन्ड हुनेछ।
हामीले फैलाउने डेटाको बहुमत बेवकूफ हो।
मैले यो भोलि मात्र गरे। मैले महान साथी र सम्मानित बजारलाई एक ईमेल पठाएको छु जसचा काकास-वुल्फ at Mindjet केहि नयाँ डाटा औंल्याउँदै कि त्यो भने फेसबुक सामाजिक पाठकहरू क्र्यास र जल्दै थिए। अवश्य पनि, अलि गहिरो हेराईले पत्ता लगायो कि पाठकहरू तल झर्छन्, तर सment्लग्नता माथि छ। र अन्तमा, यस्तो देखिन्छ कि यो मुद्दा मात्र हुन सक्छ कि खराब रूपमा कार्यान्वयन भएका सामाजिक पाठकहरू मर्दैछन्, तर राम्रो सामग्री राम्रो गरिरहेको छ। जसचा, धन्यबादले लेख फिर्ता पठाई।
जब तपाईं कार ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ, हामी कतातिर लागिरहेका छौं त्यहाँ पुग्न हामीले गर्ने सबै चीजहरू अचम्मै कुरा हो। हामीलाई थाहा छ कि कहाँ सुरु गर्ने र कहाँ समाप्त गर्ने, हामी अगाडी बढिरहेको प्रगति अवलोकन गर्दछौं, हामी समय-समयमा हाम्रो पछाडि दृश्य ऐनामा हेर्छौं, हामी साइड मिररहरू जाँच्दछौं र कहिलेकाँही हाम्रो अन्धा स्थान पनि हेर्छौं। हामीसँग स्टेरि wheelमा दुई हात छन्, एउटा खुट्टा ब्रेक वा ग्यासमा लागू हुन्छ ... र कहिलेकाँही अर्को क्लचमा हुन्छ। यदि हामीले इन्टरनेटमा पत्ता लगाएका सूचनाहरू प्रयोग गर्ने थियौं कि हामी भित्री, सतर्क, जिज्ञासु र जवाफदेही भयौं भने यो ठूलो हुनेछ र?
होईन। हामी छैनौं। हामी केहि देख्छौं जसले हाम्रो चासोलाई पिक्स गर्दछ - यद्यपि बेवकूफ - र हामी यसलाई केवल यसमा पार गर्दछौं। रीट्वीट सेयर गर्नुहोस्। मनपर्‍यो। +१ ओहो!
हप्तामा एक पटक भन्दा पनि कम, म स्नूप्समा साँचो हुनको लागि राम्रा चीज खोजिरहेको छु र व्यक्तिलाई ईमेल गरी पठाउँदैछु कि उसले वितरण गरिरहेको क्रेप कमसेकममा सही छैन (क्षमा गर्नुहोस् ड्याड!)। जब व्यक्तिहरू पाठको क्लिपमा, साउन्डबाइट, वा भिडियोमा विश्वास गर्न चाहन्छन् - तिनीहरू कहिले पनि अलि गहिरो खन्दैनन्, तिनीहरूले केवल यसलाई ट्वीट गर्छन्, पोष्ट गर्छन्, वा आफ्ना सबै साथीहरूलाई ईमेल गर्दछन्। बेवकूफता अधिक जानकारी को सुपरहिसवेमा अधिक मूल्यवान चीजको भन्दा वितरण गर्न सकिन्छ।
वास्तविकता टेलिभिजन यसको प्रतीक हो। यदि तपाईंले कहिले देख्नु भएको छैन भने चार्ली ब्रूकर वास्तविकता टेलिभिजन उत्पादनले कसरी काम गर्छ भन्नेमा देखाउनुहोस्, यो अचम्मको (र भयानक) हो:
रियलिटी टेलिभिजन हामी कसरी कार्यकुशल जानकारी साझा गर्छौं। हामी क्लिप, प्रतिलिपि, टाँस र प्रकाशित। साझा गर्न को लागी धेरै सजिलो छ।
इन्टरनेटमा पनि, तपाईं पाठ, अडियो र भिडियो को वास्तविक-क्लिपको प्रयोग गरेर विकसित गरिएको काल्पनिक कथा पढ्दै हुनुहुन्छ। फेसबुक सामाजिक पाठकहरूमा उथलपुथल विश्लेषण गर्नु राम्रो उदाहरण हो। मूल लेखले जानाजानी मानिसहरूलाई भ्रमित नगरेको हुन सक्छ ... तर तिनीहरू डेटाको नमूना भरमा देखा पर्दछ जुन जानकारीको शक्तिशाली प्रदर्शन हो। यो ग्राफिक वरिपरि कथा लेख्न धेरै सरल थियो। धन्यबाद, अरूले अलि गहिरो खने र मूल कहानी भन्दा पर केहि महत्त्वपूर्ण खोजहरू पहिचान गरे। यद्यपि प्रायः पर्याप्त हुँदैन।
हामी यस्तै गल्तीहरू प्रत्येक दिन बजारहरूसँग देख्छौं। तिनीहरू बायाँ, दाँया, पछाडि हेराई गर्न बेवास्ता गर्छन् ... न त उनीहरू कहाँ छन् भनेर थाहा छ न त उनीहरू आफू कहाँ जाँदैछन् भन्ने कुरामा ध्यान दिइरहेका छन्। यदि तपाईं केवल कहाँ हुनुहुन्छ भनेर ध्यान केन्द्रित गर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईं एउटा गड्ढाले तपाईंको सबै प्रयास विफल हुन दिन सक्नुहुन्छ किनभने तपाईं वरिपरि घुम्न जानुहुन्छ। केहि डरलाग्दो मार्ग जस्तो देखिन्छ तपाईंले सोच्नु पर्ने समस्या यही समाधान हुन सक्छ।
अवश्य पनि, हामी यसलाई राजनीतिमा अझ खराब देख्छौं। प्रत्येक राजनैतिक विज्ञापन एक ध्वनीबाइट हो जुन प्रस context्गबाट ​​बाहिर लिइएको हो र कम चरम स्थितिमा कम भयो जुन तुच्छ तुल्याउन सजिलो छ। राजनीतिज्ञ महान सम्पादन मा निर्भर गर्दछ। यो दुर्भाग्यपूर्ण छ। उनीहरूका दर्शकहरू अझ योग्य छन्।
स्निपेट्स, स्क्रिनशटहरू र ध्वनीबाइट्सको संसारमा ... बौद्धिकता भन्दा मूर्खतामा पार गर्न सजिलो हुन्छ। पाठकको रूपमा यो तपाईंको काम हो (यो ब्ल्गमा पनि) गहिरा दृष्टि लिन। यो ब्लगको रूपमा मेरो काम र जिम्मेवारी हो सबै दिशाहरूको खोजी गर्नु भन्दा पहिले मैले तपाईंलाई ग्यास वा ब्रेक र डिटोरमा बढ्न प्रोत्साहित गरें। पत्रकारहरू, ब्लगरहरू, मिडिया आउटलेटहरू र विचारधारी विश्लेषकहरूले अझ बढी डेक्सट्रोस हुनुपर्दछ र जनतालाई पूर्ण रूपमा सूचित गर्न आफ्ना सबै फ्याकल्याहरू प्रयोग गर्न सुरु गर्नु पर्छ।
मँ आशावादी छैन त्यहाँ धेरै धेरै छन् कि गर्न सक्नुहुन्छ वा त्यो पूरा गर्न इच्छुक छन्। बेवकूफ धेरै सजीलो साझा छ। मलाई विश्वास गर्नुहुन्न? ध्यानपूर्वक लेखिएको, बुद्धिमान पोष्ट साझा गर्न कोसिस गर्नुहोस्। त्यसोभए हास्यास्पद बिरालो तस्वीर पोष्ट गर्नुहोस्। कुन राम्रो प्रदर्शन गरियो?
कसरी Google विश्लेषक अभियान ट्र्याकिंग Hootsuite मा जोड्ने
मई 24, 2012 मा 10: 19 एएम
डगलस, मलाई यो पोष्ट मन पर्यो। ट्विटरको बारेमा मैले पहिले पढेको कुरा भनेको प्रत्येक लिंक लिंक जुन तपाईंले पोष्ट गर्नु भएको थियो वा अगाडी आँखा चिम्लेर रीट्वीट गर्नुको सट्टा जाँच गर्नु थियो किनभने यो १ characters० क्यारेक्टरहरूमा आकर्षक विषय भएको छ। केहि समय म दुई पटक सोच्छु र मेरो ट्वीटहरू सेन्सर गर्दछु र पोष्ट नगरेको खण्डमा, यदि तिनीहरू अर्ध-ब्ल्यान्डमा केहि साझा गरिरहेका छन्। म कसरी चकित छु कि व्यक्तिहरू कसरी उनीहरूले आफ्नो राजनीतिक / धार्मिक / नैतिक पूर्वाग्रह ईमेल अग्रेषित गरेर वा फेसबुकमा पोस्ट गरेर मूल्य थप गर्दैछन् भन्ने सोच्छन्। मसँग एक पुरानो साथी छ जो एक वास्तविक क्सीनोफोब हो र उनी आश्चर्यचकित हुन्छन् किन कि म उनका ईमेलहरूलाई जवाफ दिदिन। सत्य यो हो कि उसका ईमेलहरू मेरो स्पाम फोल्डरमा जान्छन् र म उहाँबाट ईमेलहरू एक चौथाईमा एकचोटि जाँच गर्दछु, जोडी जोकहरू वा उनको हजुरआमा-छोरीको तस्वीरहरूमा जवाफ दिँदै ... केवल गैर-आपत्तिजनक सामान। र म जाँच्दै छु, म विश्वास गर्न सक्दिन कि म अझै राम्रो भाग्यको लागि "वा १० पुस्ताको श्रापबाट उम्कन!" मैले उनीहरूलाई नभए पनि उनीहरूलाई भनेको हुँ। त्यस्तो प्रकारको सामानको लागि अति व्यस्त। यहाँ एक राम्रो विचार को साथ मित्र बाट अर्को ईमेल छ ...
विषय: Fw: जान्नको लागि महत्त्वपूर्ण
सबैजना सचेत रहनुहोस्,
यदि कुनै पनि अवस्थामा कसैले कल गर्दछ
तपाईको परिवारको एक सदस्य छन र तपाई नराम्रो दुर्घटनामा परेको बताउँदै हुनुहुन्छ
तपाइँ तपाइँको बारे मा बताउन र दिन को लागी बोलाएर तिनीहरूले तपाइँको पक्षमा छन्
ठेगाना / स्थान जहाँ अनुमानित दुर्घटना भएको थियो, गर्नुहोस्
होईन यो घोटाला हो।
स्पष्ट रूपमा केही [XYZ कम्पनी, तपाइँको आफ्नै सम्मिलित गर्नुहोस्] सहयोगीहरू
र उनीहरूका परिवारका सदस्यहरू पहिले नै यी घोटाला कलाकार / व्यक्तिहरूद्वारा सम्पर्क गरिएको छ।
A [XYZ कम्पनी, तपाईंको आफ्नै सम्मिलित गर्नुहोस्] सदस्य पहिल्यै गिरिएको छ
घोटाला गरियो र लुटियो जब तिनीहरू कलरले दिएको स्थानमा पुग्यो।
यो अरूलाई फर्वार्ड गर्नुहोस्।
- ओह, राम्रो। यो व्यक्तिलाई यी घटनाहरू मध्ये धेरैको पहिलो हात थियो, र यो तिनीहरूका व्यक्तिगत साथीहरूलाई भयो? मलाई लाग्छ कि हामी खुशी हुनुपर्छ कि त्यहाँ कोही व्यक्ति छन् जसले मलाई पोष्ट राख्नको लागि पर्याप्त हेरचाह गर्छन्।